Oge akpụrụ. Anyị na-eru nso ọhụrụ ice afọ? | Network Meteorology
Na njedebe nke Ogechi n'oge oge Cretaceous e nwere nnukwu ndọtị nke gụnyere dinosaurs niile na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụdị ndụ. Ozizi a nabatara bụ nke ọdịda nke nnukwu meteorite na mpaghara Central America. N'ịgbaso ọtụtụ uzuzu dị na mbara igwe, ha gbochiri ka ìhè anyanwụ ghara ịbịakwute ya, na-eme ka ihe ọkụkụ ghara inwe ike iji foto see foto ma na-emetụta ihe oriri n'ụzọ dị njọ. Ọ bụ mgbe 35% nke ndụ niile dị n'ụwa nwụrụ, na-enye ụzọ Oge akpụrụ.
Youchọrọ ịma ihe niile gbasara ihe mere na afọ ice? Anyị na-abịaru afọ ice ọzọ? Na nke a, ị nwere ike ịmụ ihe niile.
1 Achọpụtaghị nke ahịhịa na ahịhịa
2 Njirimara oge ice
3 Anyị dị nso na afọ ọhụrụ akpụrụ?
4 Kedu ihe mere n'oge ikpeazụ nke glacial?
Achọpụtaghị nke ahịhịa na ahịhịa
Ọnwụ nke nnukwu anụ ndị na-akpụ akpụ nyere ụzọ nke ice ice a maara nke ọma. N'oge a, ụmụ anụmanụ na-eji ohere dinosaurs eme ka ha baa ụba ma gbasaa. Na mgbakwunye, ekele nke obe mkpụrụ ndụ ihe nketa, a mụrụ ụdị ọhụrụ ma si otú ahụ na-enye ụmụ anụmanụ dị iche iche. Na njedebe, mmụba ha mere ka ha tinye ikike ha na akụkụ akwụkwọ ndị ọzọ. N'ime ezinụlọ iri dị na mmalite nke afọ ice a, ha ghọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80 na Eocene n’ime nanị nde afọ 10 nke mmalite.
Lelee anya geological oge ma ọ bụrụ na ịnaghị edo onwe gị nke ọma na ọkwa oge 🙂
Otutu n’ime ezinaulo nke oge a malitere na Oligocene, ya bu, ihe dika nde 35 gara aga. Ọ bụ mgbe ahụ na Miocene (n'etiti 24 na 5 nde afọ gara aga) mgbe edere ụdị dị iche iche kachasị dị iche iche n'oge afọ ice.
N'adịghị ka nkwenkwe a ma ama, afọ ndụ ice apụtaghị na mbara igwe kpuchitere ụwa niile, ma ndị a nwere pasent dị elu karịa nkịtị.
Na oge ikpeazụ a, nke mbụ na nke kachasị ochie Hominoidea pụtara, dị ka Proconsul, Dryopithecus na Ramapithecus. Malite na Miocene, ọnụ ọgụgụ nke anụmanụ ndị na-enye ara malitere ịdalata na, n'ihi mgbanwe mgbanwe ihu igwe miri emi mere n'oge Pliocene, ihe dịka afọ 2 gara aga, ọtụtụ ụdị na-apụ n'anya.
Ọ bụ mgbe ahụ ka oge ice ga-amalite n'ime Pleistocene ebe ndị primates na-aga n'ihu na otu onye n'ime ha ga-eweta ọchịchị ya: ụdị Homo.
A kọwara oge ice dị ka oge nke ejiri ọnụnọ akpụrụ akpụ dị ukwuu na-adịgide adịgide. Akpụrụ a na-agbatị ruo ma ọ dịkarịa ala otu n’ime mkpara ndị ahụ. Knownwa mara na nọrọ 90% nke oge ya afọ nde gara aga na 1% nke ọnọdụ oyi kachasị njọ. Ọnọdụ okpomọkụ ndị a dịkarịrị ala kemgbe afọ 500 gara aga. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ụwa tọrọ atọ n’ime ezigbo ọnọdụ oyi. A maara oge a dị ka Quaternary Ice Age.
Afọ anọ ice ikpeazụ mere na etiti oge nke 150 nde afọ. Ya mere, ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na ọ bụ n'ihi mgbanwe nke orbit nke ụwa ma ọ bụ mgbanwe nke ọrụ anyanwụ. Ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ na-ahọrọ nkọwa nke ụwa. Dịka ọmụmaatụ, ọdịdị nke oge ice na-ezo aka na nkesa nke kọntinent ma ọ bụ njupụta nke ikuku gas.
Dị ka nkọwa nke glaciation si dị, ọ bụ oge ejiri ịdị adị nke akpụrụ akpụ na okporo osisi ya. Site na isi mkpịsị aka aka, ugbu a, anyị abanyela n'ime oge ice, ebe ọ bụ na okpu pola nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10% nke elu ụwa dum.
Anyị dị nso na afọ ọhụrụ akpụrụ?
N'afọ a, oyi na ndịda ọdịda anyanwụ nke mpaghara Iberian Peninsula anọwo ogologo oge karịa ka ọ dị na mbụ. Mmiri nwere ngwa nju oyi na-eru ogo 2 n'okpuru nkezi nke afọ 20 gara aga. Onwa June bu kwa oyi n’adighi oyi na ogo ogo 4 di ala karie nkịtị.
Mgbanwe ihu igwe na-emekarị na mbara ala ọ bụghị n'ihi ọdịdị mmadụ na mgbanwe ụlọ ọrụ. Ọ bụ mgbanwe ndị a mere ka ahịhịa na ụmụ anụmanụ nke ụwa gbanwee wee nwee oge glacial na interglacial.
Enwere ọtụtụ ihe na-etinye aka na ihu igwe ụwa. Yamere, n’agbanyeghi na ndi oka mmuta gosiputara na okpomoku bu oke oru diri inyu anumanu (njikọ), obughi na ya. Ọnọdụ ha na-aga n'ihu na-arị elu kemgbe ọtụtụ afọ, mana ọnọdụ okpomọkụ anaghị arịwanye elu na usoro mmezi. E nwere hotter summers ọ bụ ezie na ọ bụghị consecutively.
Ihe a niile na-eme ka ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na, ọ bụ ezie na anyị na-eme ka okpomoku zuru ụwa ọnụ gbasaa karịa ọsọ ọsọ karịa okike, anyị agaghị enwe ike ịkwụsị ngwụsị nke oge agbụrụ na mbata nke ọhụụ ọhụrụ.
Kedu ihe mere n'oge ikpeazụ nke glacial?
Mgbe ọnụọgụgụ mmadụ na-ezo aka na "Oge ice" na-ezo aka n'oge ikpe-azụ ikpeazụ nke oge quaternary a. Quaternary malitere afọ 21000 gara aga wee kwụsị n’ihe dịka afọ 11500 gara aga. O mere n'otu oge na mpaghara abụọ ahụ. Enwere ike nke kachasị ukwuu na ice na ugwu ụwa. Na Europe, ice ahụ gara n'ihu, na-ekpuchi Great Britain, Germany na Poland. All North America e liri n'okpuru ice.
Mgbe kefriza, oke osimiri dara 120 mita. Nnukwu mbara dị n'oké osimiri taa dị na ala n'oge ahụ. Taa, a gbakọọ na ọ bụrụ na ice ndị fọdụrụ agbaze, oke osimiri ga-ebili n'etiti mita 60 na 70.
Kedu ihe ị chere gbasara ọbịbịa nke ọhụụ ọhụrụ? Ka anyị mara na ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge akpụrụ
Abụ m onye na 1980s mere atụmatụ na ọ bụghị naanị na Ice Ice ọhụrụ dị nso kama na ọ nwere ike ịbụ na anyị adịlarị afọ ahụ na-amaghị. Ọnọdụ ndị dị na okpomọkụ, okirikiri nke ụwa ga-agbaso na ọbụna okpomoku nke mbara ala n'onwe ya bụ ihe ngosi kachasị emetụta echiche m. Banyere esemokwu kachasị nke ndị na-egosi ma ọ bụ okpomoku nke mbara ala, nyocha emere na Antarctica kwubiri na okpomoku zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ ụwa ga-ebu ụzọ bụrụ oge ice kwesịrị ịtụle.
Dị ka ị na-akọwa, Ice Age bụ ihe a na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe na nke a na-apụghị igbochi:
«Ihe a niile na-eme ka ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na, ọ bụ ezie na anyị na-akpata okpomoku zuru ụwa ọnụ na oke ọsọ ọsọ karịa ka okike na-eme, anyị agaghị enwe ike ịkwụsị ngwụsị nke oge mmekọrịta na mbata nke afọ ọhụrụ nke ice."
Zaghachi Alfredo Grados Rivero
Injinia Lee carroll, na nkuzi ya nke na-enye ike nke Kryon, na-agwa anyị ka anyị kwado maka afọ ice anyị bidoro na afọ a 2019.
Ihe akaebe bụ, dị ka ị rụtụrụ aka, na ndekọ nke ikuku tọrọ atọ na cylinders nke ice na Antarctica, na na mgbanaka osisi. Ọ na-akpọ anyị òkù ịzụlite afọ ojuju na mpaghara, obodo, na ụlọ. N'ihi «grid eletriki adịghị njikere ịnagide afọ akpụrụ. Ọ nwere ike ịda. Ma ọ ga-ada »